Lasa ary dia nanao sambo nilentika niaraka tamin’ny lavanila anefa izy telo lahy. Velon’ahiahy ilay tantsaha rehefa naharitra ny dian’ireto milaza fa mpividy, ary tsy niverina teo aminy niaraka tamin’ny entana nifanarahana fa holanjaina. Rehefa ela niandrasana dia tapa-kevitra ilay tantsaha ka nosokafany ny fonosam-bola teny an-tanany. Teo vao hitany maso fa zavatra hafahafa ny tao anaty fonosana. Vola sandoka mitontaly 80 000 Ariary miampy ravin-taratasy maromaro, milokoloko ary notapahana mba hitovy habe amin’ny vola tena izy ny ambiny.
Kepoka ilay raim-pianakaviana fa voasoloky ary saika hamonnon-tena noho ny fahadisoam-panantenana lehibe. Omaly hariva ihany dia efa tonga nitaraina teny amin’ny biraon’ny Zandarimariam-pirenena. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny Zandary ary efa mandeha ny fikarohana ireo mpisoloky, mpanamparitaka vola sandoka ireo ankehitriny.